Rikoorradii laga diiwaan geliyey kulankii garoonka Old Trafford xalay ku dhexmaray kooxaha Man United iyo Liverpool – Gool FM
Rikoorradii laga diiwaan geliyey kulankii garoonka Old Trafford xalay ku dhexmaray kooxaha Man United iyo Liverpool
Haaruun October 21, 2019
(Manchester) 21 Oct 2019. Kooxaha Manchester United iyo Liverpool ayaa dhibacaha ku kala qeybsaday garoonka Old Trafford, kaddib markii ay ku kala bexeen barbaro 1-1 ah kulankoodii 9-aad horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedkan.
Marcus Rashford ayaa hoggaanka u dhiibay Man United oo marti loo ahaa qeybtii hore ee ciyaarta, laakiin dhammaadkii dheesha waxaa Liverpool goolka barbaraha u keenay Adam Lallana oo ka soo kacay kursiga keydka.
Waxaa hakad ku yimid guulihii 8 kulan xirriirka ahaa ay ka soo gaartay kooxda Liverpool Premier League tan iyo bilawga xilli ciyaareedka, Jürgen Klopp iyo wiilashiisa ayaana lumiyey labadii dhibcood ugu horreysay ee horyaalka kal ciyaareedkan.
Haddaba halkaan hoose ka eeg rikoorradii laga diiwaan geliyey kulankan wayn:-
>- 11 ka mid ah 31 gool oo horyaalka Premier League uu ka dhaliyey Marcus Rashford ayaa imaanayay isagoo ka horjeeda kooxaha waa weyn ee ‘big six’ la isku yiraahdo, taasoo ka dhigan in 35% uu goolashiisa ka dhaliyey lixda kooxood ee sare.
>- Manchester United ayaan guuldarro la kulmin kulan horyaalka ah iyadoo ku ciyaaraysa garoonkeeda oo ay hoggaanka qabteen qeybta hore ee ciyaarta tan iyo bishii May sanadkii 1984 markaasna iyagoo qeyta hore gool la hormay waxaa 1-2 uga adkaatay kooxda Ipswich.
>- Ole Gunnar Solskjær waa macallinka kaliya ee Jürgen Klopp ku wajahay wax ka badan hal jeer horyaalka Premier League, uuna ku guuldarreystay inuu garaaco waxaana uu ka haystaa 2 kulan 2 barbaro.
>- Tani waa markii ugu horreysay oo labo ciyaaryahan oo Ingiriis ah ay goolal u dhaliyaan labadan kooxood horyaalka Premier League kulankan dhexmara Man United iyo Liverpool tan iyo bishii November sanadkii 2001, markaasoo ay Man U iyo Reds ay goolal u kala dhaliyeen Michael Owen iyo David Beckham.
>- Ma jiro difaac sameeyey caawin ka badan horyaalka Premier League tan iyo markii uu bilawday xilli ciyaareedkii hore inta uu sameeyey Andrew Robertson oo ah 14 caawin isagoo la sintay laacibka ay isku kooxda yihiin ee Trent Alexander-Arnold.
Horudhac: Sheffield United vs Arsenal… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka caawa ee Premier League)
“Wuxuu sugayey Hilib, Kalluun ayaase loo keenay” – Jose Mourinho oo ku camirtay Klopp, kuna faraxsan barbarihii xalay Man United iyo Liverpool